Ɛhia sɛ Mebɔ Bosea?
Ɔwɛn-Aban | December 2014
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bengali Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chuvash Cibemba Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Marathi Maya Mongolian Moore Myanmar Nepali Ngabere Norwegian Nzema Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Umbundu Urdu Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xhosa Zulu
“Wobɔ bosea a, ɛte sɛ ayeforɔ, nanso ne tua te sɛ ayie.”—Swahilifoɔ abɛbusɛm.
WOKƆ Afrika apueeɛ fam a, saa abɛbusɛm yi agye din wɔ hɔ paa. Emu nsɛm ma yɛhu adwene a nnipa a wɔwɔ wiase no pii kura. Wo nso, sɛ wokɔ wo yɔnko nkyɛn anaa baabi foforɔ kɔbɔ bosea a, ɛyɛ a wonya saa adwene no bi anaa? Ɛwom sɛ ebia biribi nti, ɛbɛhia sɛ wokɔbɔ bosea, nanso wohwɛ a boseabɔ yɛ adepa? Ɔhaw bɛn na boseabɔ bɛtumi akɔfa aba?
Swahilifoɔ bɛ foforɔ kyerɛ ɔhaw a boseabɔ bɛtumi akɔfa aba. Ɛka sɛ: “Boseabɔ sɛe nnamfoɔ.” Ampa, boseabɔ tumi sɛe yɛne afoforɔ ntam. Ebia yɛde adwempa na ɛbɛkɔ boseabɔ, na yɛbɛyɛ nhyehyɛe pa a ɛbɛma yɛatumi atua. Nanso, ɛnyɛ bere nyinaa na nneɛma kɔ sɛnea yɛpɛ. Nhwɛsoɔ bi ne sɛ, ebia na obi akɔbɔ bosea nanso wantumi antua no bere ano. Ɛba saa a, nea ɔmaa no bosea no bo tumi fu. Ɔbɛtumi de ɔkafoɔ no ho asɛm ahyɛ ne mu, na ɛbɛwie aseɛ no na asɛe wɔn mmienu ntam. Ɛtumi sɛe wɔn mmusua ntam mpo. Enti bosea deɛ wobɛgye a, gye sɛ ato nea ɛyɛ den. Ɛnsɛ sɛ wode yɛ wo suban.
Boseabɔ nso tumi sɛe yɛne Onyankopɔn ntam. Ɔkwan bɛn so? Nea ɛdi kan, Bible ka sɛ obi de ka na ɔboapa yɛ sɛ ɔrentua a, ɔyɛ ɔdebɔneyɛfoɔ. (Dwom 37:21) Ɛsan ka no pen sɛ “deɛ ɔgye obi hɔ bosea no yɛ akoa ma deɛ ɔbɔ no bosea no.” (Mmebusɛm 22:7) Sɛ wogye obi hɔ bosea a, ɛnkɔsi sɛ wobɛtua ka no awie no, wo nsa hyɛ n’anom. Afrika bɛ foforɔ foa so sɛ: “Wosrɛ obi nan nante a, nea ɔpɛ na ɔde wo kɔ.” Nea ɛkyerɛ ara ne sɛ, wode ka a wonne wo ho.
Sɛ wogye obi hɔ bosea a, ɛsɛ sɛ woma ne tua yɛ wo asɛnhia. Anyɛ saa a ɛde ɔhaw bɛba. Wo ho aka dɔɔso a, ɛma woteetee, ɛgya wo kɔdaanna, ɛma woyɛ adwuma boro so, ɛde wati-me-waka-me ba awareɛ mu, ɛpaapae mmusua mu, na ɛbɛtumi akɔwie kɔɔto ma wɔakyere wo ato mu mpo. Asɛm a ɛwɔ Romafoɔ 13:8 yi yɛ nyansasɛm paa. Ɛka sɛ: “Ɛnsɛ sɛ mode obiara ka biara sɛ ɔdɔ a mode bɛdodɔ mo ho.”
BOSEA NO, MEHIA?
Nea yɛaka yi kyerɛ sɛ ɛnsɛ sɛ yɛtutu mmirika kɔbɔ bosea. Ɛbɛyɛ papa sɛ wobisa wo ho sɛ: Mammɔ bosea a, merentumi ntena? Mammɔ bosea a, me ne m’abusua ano aduane bɛbɔ yɛn anaa? Sikanibere anaa akɛsesɛm nti na merekɔbɔ bosea? Sɛ woma w’ani sɔ nea wowɔ a, ɛyɛ sen sɛ wobɛsoa ɛka agu wo ho so.
Ɛwom, ɛtɔ da a biribi tumi si ma woyɛ wo ho hwee a ɛnyɛ yie, enti bosea ara na wobɛbɔ. Ɛba saa a, hwɛ sɛ wobɛdi nokorɛ na woatua ka no. Yɛbɛyɛ dɛn ayɛ saa?
Baako ne sɛ, ɛnsɛ sɛ wonya adwene sɛ nea wabɔ wo bosea no wɔ ne biribi di, enti sɛ woantua koraa a ɛnyɛ hwee. Sɛ ɛyɛ yɛn sɛ obi wɔ sika a, ɛnsɛ sɛ yɛte nka sɛ, ɛsɛ sɛ ɔtete sika ma yɛn. Afei nso ɛnsɛ sɛ yɛnya adwene sɛ ɔno deɛ yɛbu no fa so a, ɛnyɛ hwee. Hwɛ na woamma w’ani ammere wɔn a wobu wɔn asikafoɔ no.—Mmebusɛm 28:22.
Afei hwɛ sɛ wobɛtua ka a wode no ntɛm. Sɛ nea ɔmaa wo bosea no ankyerɛ bere a ɔpɛ sɛ wotua ka no mpo a, hyɛ no bere na hwɛ di so. Daakye asɛm nti ɛbɛyɛ papa sɛ moyɛ krataa to so. (Yeremia 32:9, 10) Ne papa mu no, ɛsɛ sɛ wo ara wode sika no kɔ na ama woatumi ada onii no ase. Sɛ wode obi ka na wodi wo bɔhyɛ so tua a, ɛma wo ne ne ntam yɛ papa. Yesu kaa wɔ ne Bepɔ so asɛnka no mu sɛ: “Momma mo Aane nyɛ aane, na mo Dabi nyɛ dabi.” (Mateo 5:37) Afei nso ma Yesu afotuo yi ntena w’adwenem bere nyinaa: “Biribiara a mopɛ sɛ nnipa nyɛ mma mo no, mo nso monyɛ wɔn saa ara.”—Mateo 7:12.
BIBLE AFOTUO A ƐBƐBOA WO
Bere biara a ɛbɛyɛ wo sɛ kɔbɔ bosea no, hwɛ Bible afotuo yi: “Nokwasɛm nie, mfasoɔ kɛseɛ wɔ onyamesom pa ne deɛ obi wɔ a ɔma n’ani sɔ so.” (1 Timoteo 6:6) Nea ɛkyerɛ ne sɛ, sɛ wopɛ sɛ wokwati ɔhaw a boseabɔ de ba no a, ɛnneɛ ma w’ani nsɔ nea wowɔ. Ampa, baabi a wiase adu no, nnipa apɛ afɛfɛsɛm, enti ɛyɛ den sɛ w’ani bɛsɔ nea wowɔ gye sɛ woma “onyamesom pa” di w’anim. Wobɛyɛ dɛn ayɛ saa?
Wo deɛ ma yɛnhwɛ Kristofoɔ bi a wɔwɔ Asia. Bere a wɔwaree foforɔ no, sɛ wɔhu sɛ obi wɔ ɔno ara ne fie a, na ɛyɛ wɔn fɛ paa. Enti wɔkɔɔ sikakorabea ne wɔn abusuafoɔ hɔ kɔpɛɛ bosea sɔɔ wɔn sika so kɔtɔɔ dan. Nanso, anni gyina koraa na wɔbɛhuu sɛ sika a bosome biara wɔtua no nyɛ agorɔ. Enti wɔkekaa nnwuma bɔɔ so ma ɛgyee wɔn bere nyinaa; wɔn mma mpo wɔannya bere amma wɔn. Ɔbarima no kaa sɛ: “Ateetee, ɛyaw, ne kɔdaanna a ɛkɔfa baeɛ no gyaa me tipaeɛ. Afei deɛ na yɛn kɔn mu rebu.”
“Sɛ wonya Onyankopɔn adwene wɔ ahodeɛ ho a, ɛboa paa”
Akyiri yi, wɔkaee asɛm a ɛwɔ 1 Timoteo 6:6 no, na wɔbɛhuu sɛ nea ɛbɛboa wɔn ara ne sɛ wɔbɛtɔn fie no. Enti wɔyɛɛ saa nanso ɛgyee mfie mmienu ansa na wɔretua wɔn ho aka awie. Ɛdeɛn na awarefoɔ yi sua fii nea ɛtoo wɔn no mu? Wɔkaa sɛ: “Sɛ wonya Onyankopɔn adwene wɔ ahodeɛ ho a, ɛboa paa.”
Swahilifoɔ bɛ a yɛkaa ho asɛm mfitiaseɛ no, nnipa pii nim. Nanso ɛno mmaa nkurɔfoɔ nnyae boseabɔ. Sɛ wohwɛ Bible afotuo a yɛasusu ho yi a, wonhu sɛ nyansa wom sɛ obiara bɛbisa ne ho sɛ, Ɛhia sɛ Mebɔ Bosea?
Sika ntumi ntɔ anigye. Nanso, Bible mu afotu nnan bi wɔ hɔ a ebetumi aboa wo sikasɛm.
Sika ma yetumi totɔ nneɛma bi a yehia, nanso nneɛma a etumi ma yenya abotɔyam no, sika ntumi ntɔ.
ASƐM A ƐDA SO Onyankopɔn Yɛ W’adamfo Anaa?
ASƐM A ƐDA SO Wonim Onyankopɔn Din? Ɛyɛ a Wobɔ?
ASƐM A ƐDA SO Ɛyɛ a Wo ne Onyankopɔn Bɔ Nkɔmmɔ?
ASƐM A ƐDA SO Ɛyɛ a Woyɛ Nea Onyankopɔn Pɛ?
ASƐM A ƐDA SO Dɛn na Ɛkyɛn Wei?
Timgad​—Kuro Bi a Ahinta mu Ahintasɛm Ada Adi
NSƐM A AKENKANFO BISA Dɛn ne Buronya Ho Nokwasɛm?
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN December 2014 | Wobɛtumi Afa Onyankopɔn Adamfoɔ
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie ƆWƐN-ABAN December 2014 | Wobɛtumi Afa Onyankopɔn Adamfoɔ
December 2014 | Wobɛtumi Afa Onyankopɔn Adamfoɔ
ƆWƐN-ABAN December 2014 | Wobɛtumi Afa Onyankopɔn Adamfoɔ